I-Oyamel Cabin e-The Mariposa Sanctuary Reserve - I-Airbnb
I-Oyamel Cabin e-The Mariposa Sanctuary Reserve
Angangueo, Michoacán, i-Mexico
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Salvador
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Salvador izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Uma uthanda ukuthula kwemizana emangalisayo futhi uthintana nemvelo, yiza kulezi zindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezinhle ezise-Magic Village yase-Angangueo, imizuzu embalwa ukusuka endaweni engcwele yase-El Rosario nase-Sierra Chwagena, i-Monarch Butterfly ngaphakathi ehlathini.
Ngesitayela nokuhlobisa kwe-Pueblo Mágico ne-Antiguo ehlanganisa ngokuphelele ukubukeka okuhlaba umxhwele nemigwaqo yedolobhana.
Eduze namadolobhana omlingo, i-El ORO, i-Tlalpujahua, i-Grutas de Tziranda, i-Los Azufres nama-spa ayo.
Inendawo yokuhamba kanye nendawo yezimoto ezingu-2 futhi kusukela lapho kufanele ukhwele izindiza ezintathu zezitebhisi ezingenza kube nzima ukukhuphuka abantu abanezinkinga zokuhamba noma asebekhulile, ukuze ufike endlini ngakho situsa nokuba ungalethi i-suitcase enkulu ngoba kufanele uyikhwele. Ukubuka kuyazuzisa nokho.
4.55 · 53 okushiwo abanye
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingamamitha angaba ngu-200 ukusuka enkabeni yedolobhana elimangalisayo lase-Angangeo, lapho ungavakashela khona amasonto futhi uhambe emigwaqweni yawo emincane.
Ukuze udle, situsa indawo yokudlela ye- "los arcos" etholakala ngokuqondile enkabeni yedolobhana. Ungazama futhi ukulangazelela ezitodlwaneni ezizungeze idokodo.
Jabulela ukushona kwelanga endaweni yokubuka noma uvakashele enye yezindawo ezimbili zokubuka ("la Cruz" noma "la cueva de la Virgen de Guadalupe).
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe izonikezwa isakhamuzi sendawo futhi izoba ngeyakho ngokuphelele.